गर्मीमा घरको साजसज्जाः यसरी बन्छ कुल
गर्मी बढेसँगै तपाईंलाई आफ्नो ओछ्यान साँघुरो लाग्न थालेको छ । कोठा उकुसमुकस लाग्न थाल्छ ।
यत्रतत्र छरिएका सामाग्रीहरु, झ्याल-ढोकाको बाक्लो पर्दा, ओछ्यानमा बिच्छ्याइएको गाढा रंगको बेडकभर सबैकुरा पट्यारलाग्दो लाग्छ । किन ?
किनभने गर्मी बढ्यो । वायुमण्डलमा तातो हावा चल्न थाल्यो । यसरी बद्लिएको मौसमसँग घरको साजसज्जा परिवर्तन नगर्दा घर-कोठा बाफिएको झै लाग्न थाल्छ । किनभने जाडो याममा घरलाई न्यानो राख्नका लागि जसरी झ्यालको पर्दादेखि कार्पेटसम्म परिवर्तन गरिएको हुन्छ, त्यसले घरलाई पट्यारलाग्दो बनाइदिन्छ । गर्मी याम सुरु भएसँगै घरको साजसज्जामा थोरै परिवर्तन गरेर सितल एवं खुला अनुभव गर्न सकिन्छ । कसरी गर्ने त साजसज्जामा परिवर्तन ?
गर्मी बढेसँगै तपाईंले बाग्लो वा न्यानो लुगाफाटो थन्को लगाउनुभएको छ । ति लुगाहरु भित्तामा झुड्याउने, जथाभावी राख्ने नगरौं । जाडो याममा प्रयोग गरिएका लुगाफाटोदेखि ओड्ने-ओछ्याउने, हिटर, कुशनलाई व्यवस्थित ढंगले राख्नुपर्छ ।
यसैगरी अनावश्यक फर्निचर लगायतका सामाग्री पनि थन्को लगाउनुपर्छ । अर्थात घर, कोठा खुला राख्नुपर्छ । जथाभावी राखिएको सामाग्रीलाई व्यवस्थित गर्दा पनि घर खुला देखिन्छ । यसरी खुला भएपछि ताप आवशोषित हुँदैन, जसले गर्दा कोठा गर्मी हुँदैन ।
झ्याल खुला राख्नुपर्छ, जसले बाहिरको हावा आउजाउ गर्न सक्छ । हुन त झ्याल खुला राख्दा लामखुट्टे आउने समस्या हुन्छ । त्यसैले झ्यालमा जाली अनिवार्य लगाउनुपर्छ । लामखुट्टे नछिर्ने जाली लगाएपछि झ्याल खुला राखे हुन्छ ।
बाहिरको हावा आउजाउ भएमा त्यसले पनि घरलाई केही सितल बनाउँछ ।
सकसमा छन् , बालबालिका डिजिटल लतको खतरा
कोरोना भाइरस विरुद्ध यि खानेकुरा उपयोगी